Dhambaal | Arimaha Bulshada
Qeybta 1-aad ee Qisada Guurkii Nabigga
October 14, 2007 at 4:49 pm | Posted in Dhambaal | Leave a comment
GUURKII NABI MUXAMMAD” Nabigu isaga oo 25
jir ah ayuu guursaday Khadiija oo ka wayneyd 15 sano”
Nabi Muxammad (NNK) wuxu ahaa tusaale nool oo dunida loo soo diray si loogaga daydo wejiyada nolosha oo dhan.
Innagoo guud marayna guurkii nabi Muxammad, nabad iyo naxariisi dushiisa ha ahaatee, bal marka hore aynu soo qaadanno xaqiiqooyin dhowr ah;
1.Guurku wuxu lagama maarmaan u yahay habsami u jiiritaanka bulsho.
2.Nabigu isaga oo 25 jir ah ayuu guursaday Khadiija oo ka wayneyd 15 sano.
Iyada ayaanu la noolaa ilaa konton jirkiisii, carruurtiisa oo dhanna u dhashay Ibrahim mooyee.
Kaligeed ayuu la noolaa ilaa ay ka geeriyootay iyadoo 65 jir ah, intay noolaydna dumar kale lamuu guursan.
3.56 jirkiisii ilaa 60 jirkiisii Nabigu wuxu guursaday sagaal haween ah oo isku xiga.
Guurarkiisa badankodu waxay dhaceen shan sano gudahood markuu ku jiray marxaladdii dacwaddiisa (mission) ugu adkayd.
4.Muxamad wuxu ku noolaa nolol fudud oo caadi ah.
Maalintii wuxu ahaa ninka ugu mashquulsan waagiisa.
Wuxu isku mar ahaa madaxa waddanka, garsooraha, taliyaha ciidamada, Macallin iyo imaam.
Habeenkii wuxu ahaa ninka ugu Alla-ka-cabsi badan, Seddex meelood laba habeenkii wuxu ku soo jeedi jiray cibaado.
Qalabka gurigiisu wuxu ka koobnaa dermooyin, joogag, bustayaal, iyo waxyaabo kale oon muhiim ahayn inkastuu ahaa borqorkii carabta oo dhan,
5.Haweenkiisa oo dhammi, Caa’isha mooyee, waxay ahaayeen carmal iyo kuwo la furay iyo kuwo laga dhintay- badankooduna malaheyn qurux, qaarna waabay ka da’ waynaayeen, dhammaantoodna waxay u baahnaayeen inuu gacan qabto.
Haddaba waxa is weydiin leh:
b.Muxuu nabigu (NNK) 25 jir ugu guursaday isagoon wax dumar ah hore xidhiidh ula yeelan?
t.Muxuu u doortay carmali 15 sano ka weyn? Muxuuse keligeed ula noolaa ilaa dhowr iyo konton jirkiisii intay ka geeriyoonaysay?
j.Muxuu u guursaday carmaliyadaa masaakiinta ah een lahayn wax loogu xisho?
x.Muxuu ugu noolaa noloshaa fudud ee caadiga ah isagoo wax kasta oo raaxo leh awoodayey?
kh.Muxuu haweenkaa badan u guursaday shantii sano ee noloshiisa ugu mashquulsanaa markaasoo dacwaddiisu maraysay meeshii ugu halis badnayd?
La soco qeybta dambe ee qisada guurkii Nabigeena NNKH.